Yan Aung: မျောက်နှင့်အုန်းသီး
တစ်ညတွင် ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးသည် သူ့ထံတွင် ပညာသင်ကြားနေသော မင်းညီမင်းသားများ၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်လိုသဖြင့် အားလုံးကို စုဝေးခေါ်လိုက်လေသည်။
ထိုညက ကောင်းကင်တွင် လမင်းကြီးက ထိန်ထိန်သာနေခဲ့လေသည်။
တပည့်မင်းညီမင်းသားများမှာလည်း ဆရာကြီးပြောပြမည့် သင်ခန်းစာပုံပြင်လေးအကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစားဖြင့် စောင့်မျှော်နားထောင်နေခဲ့ကြလေသည်။
ဆရာကြီးက ထိုသို့ အစချီလိုက်သည်နှင့် တီးတိုးတီးတိုး စကားပြောနေကြသော မင်းသားငယ်များအားလုံး မီးကိုရေနှင့်ဖြန်းလိုက်သကဲ့သို့ ငြိမ်ကျသွားကြလေသည်။
ဆရာကြီးက ချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ရင်း သူ၏ အသံဝါကြီးဖြင့် ပုံပြင်လေးကို ဆက်ပြောပြလေသည်။
မျောက်ဖမ်းရင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်နေတဲ့ မုဆိုးတစ်ယောက် ရှိသတဲ့…
မျောက်ဆိုတာ အင်မတန်မှ လျင်မြန်ဖျတ်လတ်တဲ့ သတ္တ၀ါမို့ ဖမ်းရတာလည်း အတော်ခက်ခဲသပေါ့ကွယ်…
အဲဒီ့မျောက်ဖမ်းသမားဟာ ဘယ်လောက်တော်သလဲ ဆိုရင် သူများမျောက်ဖမ်းမုဆိုးတွေ မျောက်တစ်ကောင်မှ မမိခဲ့ရင်တောင် သူက အနည်းဆုံးတစ်ကောင်တော့ အမြဲမိနေတာပဲတဲ့…”
ဆရာကြီးက ပြောလည်းပြော၊ ပရိသတ်ကိုလည်း တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ရင်း အကဲခတ်လိုက်သည်။
မင်းသားငယ်များမှာ ဆရာကြီးဆက်ပြောမည့် အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်နှင့်…
“အေး… အဲဒီလိုမျိုး မျောက်ဖမ်းတော်တဲ့ မုဆိုးအကြောင်းကို ရွာနီးချုပ်စပ်က လူတွေကပါ ကြားသိလာရတော့ သူ့ရဲ့မျောက်ဖမ်းနည်းကို စိတ်ဝင်တစား လာမေးကြတော့တာပေါ့…
မျောက်ဖမ်းမုဆိုးကလည်း သူ့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ လျှို့ဝှက်ချက်မို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြဘဲ လာမေးတဲ့သူတွေကို တမင်တကာ လှီးလွှဲပြောဆိုနေခဲ့တော့တာပေါ့…
ဒါနဲ့ လူတွေကလည်း အဲဒီ့မျောက်ဖမ်းမုဆိုး မျောက်သွားဖမ်းတာကို လိုက်ချောင်းကြည့်မှပဲ သူ့နည်းကို သိတော့မယ်ဆိုပြီး မုဆိုး တောထဲကို နောက်တစ်ခေါက် မျောက်ဖမ်းသွားမယ့်အချိန်ကို စောင့်ကြည့်နေကြတော့တာပေါ့ကွယ်...
“ဟန်နီ… ကိုယ်မောပြီကွယ်… ရေချမ်းချမ်းလေး တစ်ခွက်ဆက်ပါဦး…”
ဆရာကြီး၏ ကတော်က သူမ၏ နှုတ်ခမ်းကို တစ်ချက်စူလျက် ဆရာကြီးဘေးနားမှ ထသွားခဲ့လေသည်။
မင်းသားငယ်များမှာတော့ ခေါင်းကိုငုံ့လျက်၊ အချင်းချင်းလက်တို့ကာ ပြုံးစိစိဖြစ်နေကြလေသည်။
“ဂလု… ဂလွတ်.. ဂလု… ဂွပ်….”
ဆရာကြီးလည်း သူ၏ဟန်နီ ကမ်းလာပေးသော ရေချမ်းချမ်းလေးတစ်ခွက်ကို တဂွပ်ဂွပ်မြည်အောင် သောက်သုံးပြီးသကာလ သူ၏ပုံပြင်ကို ဆက်လေသည်…
“အဲ… ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာပေါ့…. မျောက်ဖမ်းမုဆိုးလည်း တောထဲကို နံနက်ခင်း လင်းအားကြီးအချိန်မှာ ထွက်ခွာသွားတာကို သူ့အိမ်ရှေ့က ချုံပုတ်ထဲမှာ ကင်းပုန်းဝပ်နေတဲ့ စွမ်းအားရှင် ဘလော့ဂါ နှစ်ယောက် (အဲ. ဟုတ်ပါဘူး..) လူနှစ်ယောက်က လှမ်းမြင်လိုက်သတဲ့…
မျောက်ဖမ်းမုဆိုးသမား နာမည်က ဆွမ်ကျဲအိုိ တဲ့… သူက ချင်းလူမျိုးလေ… မြူဆွမ်တွေကို ခပ်ကျဲကျဲ ဖျော်သောက်ရင်းက အိုသွားလို့ ဆွမ်ကျဲအို လို့ နာမည်တွင်လာခဲ့တာပေါ့…
ဆွမ်ကျဲအိုကို လိုက်လံချောင်းမြောင်းပြီး ခဲလက်သီးစာကျွေး (အဲ… ဆောရီး မှားပြန်ပြီကွယ်) လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ထုတ်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်လေးနှစ်ယောက်နာမည်ကတော့ ယူအာဆွိနဲ့ ယူအာကွိ်တဲ့…
ယူအာဆွိလို့ နာမည်တွင်ရတာက သူက အမြဲပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနေတတ်ပြီးတော့ ဆွိဖြစ်လို့တဲ့လေ…
ယူအာကွိကတော့ ပြောလိုက်ရင် သောက်တလွဲဖြစ်ပြီး အမြဲအပြစ်တင်ခံရလို့၊ ဘန်းစကားနဲ့ ခပ်လန်းလန်းလေးပြောရရင်တော့ ခဏခဏ ကွိတတ်လွန်းလို့ ယူအာကွိလို့ နာမည်ပေးထားကြတာပေါ့…
မင်းသားငယ်လေးများမှာ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ဆရာကြီးပြောသည့် နာမည်ဆန်းများကို ပါးစပ်မှ လိုက်လံရွတ်ဆိုနေခဲ့ကြလေသည်။
အက္ခရာနတ္ထိ မင်းသားက အားလုံးကြားအောင် အော်ပြောသည်…
“ရှီးဘောဒိသာပါမောက္ခကြီးရဲ့ ဇာတ်ကောင်နာမည်တွေက ၀မ်ချောင် မာဟန် ကျန်းလုံ ကျောက်ဟူ နာမည်တွေထက် အပုံကြီးသာတယ်…”
“၀ါးးးးး ဟားဟားဟားဟား… သွပ်သွပ်သွပ်… အက်အက်အက်… ဟတ်ဟတ်..”
ဆရာကြီးလည်း နှစ်ခြိုက်အားရစွာ ပြုံးလိုက်ရင်းက အသံကို မြှင့်လျက် ဆက်ပွားလေတော့သည်…
“ဆွမ်ကျဲအိုမုဆိုးလေးနောက်ကို လူမသိသူမသိ လိုက်လံချောင်းမြောင်းရတာကလည်း စွမ်းအားရှင်တွေလို ရဲက ဘက်ကပ်နောက်ခံ မပေးထားတော့ အခက်တွေ့ရတာပေါ့ကွယ်…”
ရှားလားလားနန္ဒမင်းသားက ထိုင်ရာမှ ထမေးသည်…
“ရှီးဘောကလည်း… ခက်တာလိုက်လို့… ကဒ်ထူပြားပေါ်မှာ ဆော့ဖ်ပင်နဲ့ စာလုံးကြီးတွေ ရေးပြီးလိုက်ရင် ဘယ်သူမှ မထိရဲတော့ဘူးလေ…”
“ဟေ… လုပ်ပါဦး… ဘာရေးရမှာလဲ…”
ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးလည်း စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု အိုင်ကွီ (အိုင်ကျူထက်မြင့်သော အိုင်ကွီ) မြင့်သော ရှားလားလား မင်းသား၏ စကားကို စိတ်ဝင်တစားဖြင့် ပြန်မေးလိုက်လေသည်…
“ဩော်… ရှီးဘောကလည်း… စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကို ဆန့်ကျင်သည်… မဲရုံသို့ သွားကြပါစို့… ရှားလားလားလား…လို့ ရေးလိုက်ပေါ့…. ရှီးဘောကလည်း… ဟာပဲ… ဟာပဲ… ဟာကို…”
ပြောရင်းဆိုရင်းက ရှားလားလားမင်းသား နွဲ့သွားပါတော့သည်…
“မင်းမလဲကွာ… အရေးထဲ နွဲ့နေရသေး… Brokeback Bloggers ဖြစ်ချင်နေလို့လား… အားလုံး ကျားကြီးပဲ. သိလား… ဆရာကတော်နဲ့ သူ့သမီးလေး ပျံလန်ရှင်ဂွမ်းဂွိကလွဲ လို့…”
ပြောလည်းပြော. ဆရာကြီးကတော်ကို တစ်ချက်လှမ်းရှိုးလိုက်သည်မှာကား ပလေယာမင်းသားပင် ဖြစ်တော့၏…
ဆရာကြီးကတော် ဟန်နီကြည့်မြင်တိုင်ထိပ်မှောင်ဝင် မှာလည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် ပဲကြီးလှော်ကိုသာ ငုံ့စားနေခဲ့ရင်းက…
“အဲတော့်… ထွက်ကုန်ပြီ… အဟင့်… ၀ါး…”
ဆရာကတော်ငိုတော့ ဆရာကြီးလည်း ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်ခါ သူ၏ ရွှေဥာဏ်တော်ကို ကွန့်မြူးရပါလေတော့သည်…
“အို… ဘယ်ဘယ့်. အိုဘယ့် နှမတော်… ထွက်တော်မူပြီလား..”
“အို…ဘယ်ဘယ့်.. အိုဘယ့် နှမတော်… လျက်တော်မူပါလား.. (လျက်ဆား)”
“အို..ဘယ်ဘယ့်.. အိုဘယ့် နှမတော်.. ကွက်တော်မူနဲ့လား…” (စိတ်ကွက်ခြင်းကိုသာ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏… စကားချပ်)
ဆရာကတော်လည်း ဆရာကြီး၏ အချော့တော်တေးဖြင့် မှေးမပျော်နိုင်ရှိနေသည်နှင့် မင်းသားငယ်များဖက်သို့ လှည့်ကာ အကူအညီတောင်းရလေတော့သည်…
ရက်ပ်ပါဟစ်ဟော့ပ်ဖလစ်ဖလော့ပ် မင်းသားက သူ၏ ပုဆိုးကို ခါးတောင်းကျိုက်လျက် ဆရာကတော်ဆီသို့ ဂျစ်ကန်ကန်ဖြင့် မထီတရီလှမ်းကြည့်လိုက်လေသည်။ (ဂျစ်ကန်ကန် မထီတရီ ကြည့်နည်းမသိလျှင် ရက်ပါများ၏ စီးရီးခွေများပေါ်တွင် ပို့စ်ပေးနေသော ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ပါလေ…)
“ရိုး.. ရိုး.. အို့… အိုး… ဟန်နီ… ငိုပါနဲ့ကွာ… အပိုတကယ်မပြော…
ဒီနေ့ပဲကြီးလှော်က မနေ့ကထက် ပေါက်တယ်.
မနက်ဖြန် ပဲလှော် ဒီနေ့ပဲထက်ပေါက်မယ်..
ရောက်လေရာ သယ်သွား. ၀ယ်စား. တကယ်မများ.. ဆယ်ပြား… အုအား…”
ဖလစ်ဖလော့ပ်၏ ခပ်မိုက်မိုက် ဟစ်ပ်ဟော့ပ် သံစဉ်များကြားတွင် ဆရာကတော်လည်း မျောသွားခဲ့လေတော့သည်…
“စောင့်နေရတာ ၁၉၉၀ ထဲကပဲ.. ဆက်ရွှီးပါဦးဗျို့…”
ပရိသတ်က ထိုသို့ပွဲတောင်းတော့ ဆရာရှီးဘောလည်း မနေနိုင်တော့ချေ…
“ဆန္ဒမစောကြပါနဲ့လေ… ဖြည်းဖြည်းပေါ့… လာ… မဲလေးထည့်သွား… ထောက်ခံမဲထည့်လည်း ထောက်ခံမဲပဲ. ကန့်ကွက်မဲထည့်လည်း ထောက်ခံမဲပဲထွက်တယ်. သိလား…”
“မတရားဘူး… အူး… ဟူးဟူး…. လုံးဝ… လုံးဝ…. လုံးးးးးဝ…”
ထိုကဲ့သို့ ထဖောက်သည်မှာကား ရော့ကာမက်တဲလ်သာကေတ မင်းသားပင်ဖြစ်တော့၏…
“ဘာကြောင့်လဲ… ဘာအတွက်လဲ…. ရှားလားလားလားလား..”
ရှားလားလား မင်းသားလည်း ထနွဲ့ပြန်ပါ၏…
“တော်စမ်းပါကွာ…. မင်းတို့က ဘာသိလို့လဲ… ဒီမဲပုံးက မိတ်အင်ချိုင်းနားကွ… လိုချင်တာပြောလိုက်… ပေါက်ဖော်ကြီးက တသွေမတိမ်းလုပ်ပေးတယ်ကွ… ကြားတယ်နော်. ထောက်လည်း ထောက်ပဲ. ကန့်လည်းထောက်ပဲ… ဒါကြောင့် မဲပုံးနာမည်ကိုတောင် တီလုတ်ကြီးကပေးထားသေးတယ်… ထောက်ကန့်ထောက် တဲ့…. ငှဲဟင်းငှဲညောင်း…”
ဆရာကြီးရှီးဘောက ငါးသလဲထိုးပြုံးကာ ပြန်ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်..
“ဟေ့ကောင်တွေ… တော်တန်တိတ်ကွာ… မင်းတို့ ပတ်စပို့်တွေ သိမ်းပစ်လိုက်လို့ နေပြည်တော် မပြန်နိုင်ဖြစ်သွားမယ်.. ဟွန်း…”
ထိုကဲ့သို့ ဘလိုင်းကြီးထကောသည်မှာကား ဆရာကြီးအားရ ကျွန်ပါးဝလုပ်နေသော အင်တာနေရှင်နယ်ဖွတ်ကြားပင် ဖြစ်တော့၏… အပေါ်အဖြူ အောက်အစိမ်းဖြင့် တိုက်ပုန်းအင်္ကျီကို အကျအန၀တ်ထားသော အင်တာဖွတ်ကားခန့်ညားလှပါဘိတောင်း…
မင်းသားငယ်များမှာလည်း နေပြည်တော်ပြန်ကာ ရှင်ဘုရင်လုပ်စားမည့်သူများ ဖြစ်သဖြင့် ပတ်စပို့ အသိမ်းခံရမည် ဆိုသည်နှင့် ၀ပ်သွားလေတော့သည်…
ထိုအခါ ဖွတ်ကြားလည်း စင်ပေါ်တက်ကာ ကမ္ဘာကျော် ဖွတ်ပုတတ်ဘုန်းတော်ဘွဲ့သီချင်းကို နားမခံသာအောင် သီဆိုရင်း ဖွတ်ကကပြပါလေတော့သည်….
“ကဲ… အားလုံးဇာတ်ကြောင်းရှင်းရင် ငါ့ဇာတ်လမ်းဆက်မယ်… ဘယ်သူမှ မကန့်ကွက်တာ ထောက်ခံတာပေါ့နော်… အက်အက်အက်”
ရှီးဘောဆရာကြီးလည်း ရော့စတီးဝပ်အသံဖြင့် ခပ်ကွဲကွဲရှတတ ရယ်ကာ သူ၏ မျောက်ဖမ်းခြင်းအကြောင်းကို ဆက်ပြောလေတော့သည်…
ပရိသတ်ကြီးကား အပ်ကျသံကြားအောင် ငြိမ်နေလေတော့သည်…..
“ယူအာဆွိ နဲ့ ယူအာကွိတို့နှစ်ယောက်သား ဆွန်ကျဲအိုနောက်ကို လိုက်တယ်ဆိုတာ ငါပြောနေတာနော်. ဟုတ်တယ်မလား..”
“ဟုတ်ပါတယ် ဆရာကြီး… အဲဒါ. ၁၉၇၄ ကတည်းကပါ… ကြာပေါ့… ဆရာကြီးပဲ ဆက်မပြောဘဲ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ထားတာ.. ၁၉၉၀ တုန်းကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ.. အဲဟဲဟဲ… ဗြဲ…”
ဝေါ်စွတ်မင်းလောင်းမင်းသား၏ ရဲရဲတောက် အသံပင်ဖြစ်တော့၏…
အင်တာနေရှင်နယ် ဖွတ်ကြား၏ ဦးခေါင်း ဆတ်ခနဲ လည်ထွက်သွားကာ ဝေါ်စွတ်မင်းလောင်းမင်းသား၏ မျက်ဝန်းများကို စိုက်ကြည့်ပစ်လိုက်သည်…
“ရော့… အင့်… ခွပ်… ဖုန်း… ဖုန်း… ဖုန်း…”
ဝေါ်စွတ်မင်းလောင်း မင်းသားတစ်ယောက် သွေ့ပုကျိကွိကွိ ဖြစ်သွားခဲ့လေတော့သည်…
အင်တာနေရှင်နယ်ဖွတ်ကြား၏ လက်သံပြောင်လေလေ၊ ရှီးဘောဆရာကြီး၏ အသံဝါကြီးက ပိုပြီး ၀ါလာလေလေပင် ဖြစ်တော့၏…
“ငြိမ်ငြိမ်နေကြလေကွာ… ဒီမှာ အာရုံစိုက်လို့မရတော့ဘူး... အကုန်ဆွဲစိပစ်လိုက်တော့မယ်… ဟွန်း..”
တက်ခေါက်သံမဟုတ်ပါ…. ငြိမ်သက်လွန်း၍ ရေကျသံကိုပင် ကြားနေရခြင်းပင် ဖြစ်တော့၏… ရေကြည်အိုင် အပန်းဖြေစခန်းမှ ရေကျသံထက်ပင် ပြင်းမည်ထင်ပါသည်… မင်းသားအားလုံးကား နပ်၏… ချက်ဆိုလျှင် နားခွက်က မီးတောက်… တောက်ဆိုလျှင် ရေကြည်အိုင်ရောက်မည် လူပါအပျောက် ဟူ၍ပင်…
“အဲဒီလိုနဲ့ပေါ့ကွယ်…. ဆွန်ကျဲအိုတစ်ယောက် မျောက်ဖမ်းမလို့ ပြင်ဆင်နေတာကို ယူအာဆွိနဲ့ ယူအာကွိတို့ နှစ်ယောက် သစ်ပင်နောက်ကနေ ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေကြသတဲ့…
ဆွန်ကျဲအိုဟာ သူ့ရဲ့ North Face ကျောပိုးအိတ်ထဲကနေ အဆင်သင့်ယူလာခဲ့တဲ့ အုန်းသီးတစ်လုံးကို ထုတ်လိုက်သတဲ့…
အုန်းသီးမှာ အပေါက်သေးသေးလေးဖောက်ထားတာကိုလည်း ဆွိနဲ့ကွိတို့ တွေ့လိုက်ရတယ်..
ပြီးတော့ ဆွန်ကျဲအိုဟာ အုန်းသီးလေးထဲကို မုန့်လေးတစ်ခုနှစ်ခု ထည့်လိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်.
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ ဆွန်ကျဲအိုဟာ အုန်းသီးလေးကို ကြိုးနဲ့ချည်ပြီး ကျန်တဲ့ ကြိုးတစ်စကိုတော့ ငုတ်တိုင်လေးတစ်တိုင်မှာ ချည်လိုက်တယ်.
ငုတ်တိုင်လေးကို မြေကြီးမှာ စွဲနေအောင် ရိုက်လိုက်တယ်.
ဆွိနဲ့ကွိတို့လည်း ဆွန်ကျဲအိုလုပ်သမျှကို စိတ်ဝင်တစားလိုက်ကြည့်နေခဲ့တာပေါ့…
ဆွန်ကျဲအိုလည်း မျောက်အတွက် ထောင်ချောင်လုပ်ပြီးတဲ့နောက် သူလုပ်ထားတဲ့ လင့်စင်ပေါ်သွားတက်အိပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတော့တာပေါ့ကွယ်…
ဆွိနဲ့ကွိတို့လည်း နီးစပ်ရာ ညောင်နှစ်ပင်ပေါ် အသီးသီးတက်အိပ်ကြတော့တာပေါ့…
အဲဒီ့ညက မိုးတွေရွာတယ်… ပြီးတော့ ညောင်နှစ်ပင်ကိုလည်း မိုးကြိုးပစ်သတဲ့…
ဩော်… ဆွိနဲ့ကွိတို့ အိပ်တဲ့ ညောင်နှစ်ပင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး…
ဆရာကြီးလည်း ပြောလည်းပြော ရယ်လည်းရယ်နေတော့ မင်းညီမင်းသားတွေလည်း စိတ်လက်ပေါ့ပါးပြီး လိုက်ရယ်ကြတော့တာပေါ့…
“ဒီတိုင်းကျတော့လည်း တို့ ရှီးဘောက မဆိုးပါဘူး… နောက်လကျရင် လခတွေတောင် တိုးပေးဦးမယ် ဆိုပဲ… အက်အက်အက်…”
ဆရာကြီးလည်း ပုံပြင်ကိုအလွတ်မပြောနိုင်တော့သဖြင့် ဘုတ်အုတ်ကိုကိုင်ကာ အသံကျယ်လောင်စွာဖြင့် ဖတ်ပြနေတော့၏…
“ကွိ… ကွိ… ခွီး… ခွီး… ၀ုအို့. ၀ုအို့…. ဖုတ်.. ဖုတ်..ဖတ်… ဖတ်… ”
အသံဗလံမျိုးစုံကြောင့် ဆွိနှင့်ကွိတို့လည်း ညောင်နှစ်ပင် ပျက်ပြီအထင်ဖြင့် လန့်နိုးလာခဲ့လေသည်..
ညောင်နှစ်ပင်မပျက်သည့်အပြင် မဲပင်ထည့်ခိုင်းနေတော့၏… (ဟတ်. ဆောရီး.. လွဲပြန်ပြီ..)
မျောက်တစ်ကောင် အုန်းသီးတစ်လုံးနှင့် နပန်းလုံးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်…
ကွိကွိမှာ မျောက်အော်သံဖြစ်ပြီး ခွီးခွီးမှာ မျောက်စိတ်တိုသဖြင့် အုန်းသီးကို ထုရိုက်ခြစ်ကုတ်နေခြင်း ဖြစ်ကာ ၀ုအို့ မှာ မျောက်ဝမ်းနည်းသဖြင့် အော်သံဖြစ်သည်… ဖုတ်.. ဖုတ်မှာကား မျောက်၏ အမြီး မြေကြီးပေါ်သို့ ရိုက်နေခြင်းနှင့် ဖတ်.. ဖတ် မှာမူ အုန်းသီး မြေကြီးပေါ် ပြုတ်ကျအောင် ရိုက်ထုတ်နေသော အသံပင်ဖြစ်တော့၏…
ဆွိနှင့်ကွိတို့လည်း မျောက်၏ ဖြစ်အင်ကို နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေစဉ် မုဆိုးကျော် ဆွန်ကျဲအို လင့်စင်ပေါ်မှ နိုးထလာသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်…
ဆွန်ကျဲအိုလည်း ဆွိနှင့်ကွိတို့ကို မြင်သွားပြီး…
“What’s up, men? What’s going on here?”
“Not much, bro… Just hanging out here and sawamonkey was busted…”
ဆွန်ကျဲအို၊ ဆွိနှင့်ကွိတို့သည် ဘရစ်တစ်ရ်ှကောင်ဆဲလ်၊ ယူအက်စ်အိုင်အက်စ်၊ ဆရာကြီးဦးဝင်းနိုင်၊ ဘ၀သစ်ဦးအောင်ကျော်၊ လှည်းတန်းဦးမြကြိုင်၊ YES၊ IELTS၊ TOEFL၊ SATI, SATII, SATIII, IV… စသည့် အနှီအင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းမျိုးစုံတွင် တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ကြသော သင်တန်းဂျပိုးများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ တွေ့လျှင် ဘိုလိုသာ နှုတ်ဆက်တတ်ကြလေသည်…
ရှေ့လျှောက် မြန်မာလိုသာ ဆက်ရေးပါမည်. (စာရေးသူ၏ စကားချပ်… ဟတ်ဟတ်ဟတ်)
ဆွန်ကျဲအိုလည်း ငါးခူပြုံးပြုံးကာ (ငါးသလဲထိုးက ရှီးဘောကပြုံးတာ. ဒါက ငါးခူပြုံး) ဆွိနှင့်ကွိတို့ကို ခေါင်းတစ်ချက်ဆတ်ပြလိုက်လေသည်…
ဆွိနှင့်ကွိတို့လည်း အောင့်မထားနိုင်တော့သဖြင့် ပေါက်ချ (အဲ.. ဆောရီး) ဖွင့်မေးလိုက်တော့လေသည်…
“ဆွန်ဆွန်ရယ်… နင်သိပ်တော်တာပဲ… မျောက်ကို အုန်းသီးနဲ့ဖမ်းသွားတာ ရေလည် လေးစားတယ်. တို့ကို ပြောပြ. ဘယ်လိုလုပ်လဲ..”
ယူအာဆွိ၏ ချိုအီမွှေးစိမ့်သော စကားချီးကို ကြားလိုက်ရသည်နှင့် ဆွန်ကျဲအိုလည်း ဖင်တွန့်သွားကာ ကျွတ်ကြဲစွာ ပြန်ပြောလေသည်…
“ဟဲ့ကောင်မ … အဲ.. ကောင်ထီး… အာ… ဆွိ… စကားကောင်းကောင်းကို မပြောဘူး. ဂျော်ရကီးကျနေတာပဲ. နင်ဘာသိချင်တာလဲ ရှင်းအောင်ပြော”
ကွိလည်း မနေနိုင်တော့သဖြင့် ၀င်ရလေတော့သည်…
“ဩော်.. ဆွန်ရယ်. သူသိချင်တာကလေ.. ဟိုဟာပေါ့နော်.. ဆွန်က ပေါ့နော်. ဟိုလေ. မျောက်ကလေးကိုပေါ့နော်.. ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်. ဖမ်းလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်. အဲတာလေ… သိချင်တာတဲ့… ပြောပြနိုင်ရင်ပေါ့နော်… တဆိတ်လောက်… နော်”
တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ်ပေါက်စန ပဲများများရန်ကုန်သူလေသံဖြင့် ညုတုတုပြန်ပြောသည်မှာကား ကွိပင်ဖြစ်တော့၏…
“ညကတစ်ညလုံး လင့်စင်ပေါ်မှာ အောင့်ထားရသမျှ ခုမှပဲ ပေါက်ကွဲနိုင်တော့တယ်. သွပ်သွပ်သွပ်….”
“ဆွန်…. ညာကစ်ပါကတ်.. ဟွန့်…”
“ဆွိ… မင်းဘာပြောတာလဲ… မင်း ငါ့ကို ရန်စတာလား… ညာကစ်ပြီး ပါကတ်ရအောင် ငါက ဘာကောင်ဖြစ်နေလို့လဲ… မင်းကွာ… မင်းကွာ… မင်းးးးးးးးး”
“ဆွန်ရယ်. အဲဒါက ဂျော်ရကီးတွေ ကကြီးသုံးပြီးပြောတာပါ… ညာကစ် ဆိုတာ ညစ်တဲ့. ပါကတ်ဆိုတာ ပတ်တဲ့… ဆွန်လေလည်တာကို ညစ်ပတ်လို့ ပြောတာ. သိပြီလား. မဆိုးပါနဲ့ကွာ. အချင်းချင်းတွေပဲ. ဖောင်ကြီးသင်တန်းတောင် အတူတူတက်ခဲ့ကြသေးတယ်လေ. မှတ်မိတယ်ဟုတ်…”
ထိုသို့ပြောတော့လည်း ဆွန်တစ်ယောက် လျှော့ချလိုက်ရပြန်လေသည်… (စိတ်)
“ကဲ.. ပြော.. ဆွန်.. ဘယ်လိုမျောက်ဖမ်းတာလဲ… ”
ဆွန်ကျဲအိုလည်း ဆွိနှင့်ကွိတို့အမေးကို ဖြေရန် ချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်သည်…
“အိမ်း… အမေးနွားကျောင်းသား အဖြေဘုရားလောင်း ဆိုသလိုပေါ့… ပညာရှိဆိုတာ မတီးမမြည်. တီးမှမြည်တဲ့ ဆည်ကြီး… အဲ.. စည်ကြီးဆိုသလိုပေါ့… မင်းတို့က မေးလည်းမေး တီးလည်းတီးတော့ ငါလည်း ဖြေပြီး မြည်ရတော့မပေါ့ကွယ်…”
ဆွိနှင့်ကွိတို့လည်း ဆွန်ကျဲအို၏ မြောက်ကြွကြွ မျက်နှာပေးကို အံကြိတ်ကာကြည့်ရင်း…
“မိုးကောင်းတုန်းရွာထားဦးပေါ့ကွာ… တူဖြစ်တုန်းနှံထားဦးပေါ့… ပေဖြစ်မှ အင်တာနေရှယ်နယ် ခုံရုံးကို ပို့ပစ်ဦးမယ်… ”
ပါးစပ်က ထုတ်မပြောပါ. စိတ်ထဲတွင်ကြိမ်းဝါးနေခြင်းသာ ဖြစ်တော့၏…
“ဒီလိုကွ… ငါက တော်ရုံတန်ရုံလူကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး.. မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့က ဖောင်ကြီးမွန်းမံသင်တန်းတက်ပြီး ဖောင်ကြီးဆင်း ဖင်ကြီးစောင်းလာသူတွေအချင်းချင်းမို့ ပြောပြတာ…”
“ဟုတ်ပါပြီ. လိုရင်းပြော. မျောက်ကို ဘယ်လိုကိုင်ထည့်ပစ်လိုက်တာလဲ.”
ဆွန်ကျဲအိုပင် အံ့အားသင့်ကာ နည်းနည်းဖြုံသွားလေသည်…
လူဆိုသည်ကလည်း ငြိမ်နေလျှင်ပိုဖိတတ်ကြပြီး အမြဲငြိမ်နေသူများ ကြွတက်လာလျှင် ဖြုံတတ်ကြသည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်လေသည်…
သုိ့သော် ဆွန်က ဟိတ်ဟန်ကောင်းသည်… မုဆိုးလည်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အရာရာကို စစ်ရေးအမြင်ဖြင့်သာ ကြည့်ရှုရင်ဆိုင်တတ်သည်… ထို့ကြောင့်လည်း နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ… (အဲ… မဟုတ်ပါဘူး.. ဖတ်လက်စ အခြေခံဥပဒေကြီးဖယ်ထားဦးမှပဲ. စာဆက်ရေးလို့တောင်မရတော့ဘူး. အဟွတ်ဟွတ်)
ထို့ကြောင့် ဆွန်ကျဲအိုတစ်ယောက် သွေးအေးလူသတ်သမား သွားလေသူ စိုးဝင်းအကြည့်မျိုးဖြင့် တစ်ချက်ကြည့်ကာ …
“အေးဆေးပေါ့ ကိုယ့်လူ… ကိုယ့်လူက တောင်းတဲ့သူ… ကျုပ်ကပေးရမယ့်သူ… အေးဆေးပေါ့… ဟင်းဟင်းဟင်း…”
ငါးမြွေထိုးအကြည့်မျိုးဖြင့် ဟင်းဟင်းဟင်းဟု အံခဲကာ ရယ်လိုက်တော့ ကွိပင် ကွိချင်စိတ်ပေါက်သွားတော့၏…
ဆွိနှင့်ကွိလည်း ခေါင်းရှေ့စိုက်ကာ သေသေချာချာ နားထောင်နေကြလေသည်…
“မျောက်ကိုအုန်းသီးနဲ့ ထောင်မဖမ်းခင် အရင်ဆုံး အုန်းသီးကို အပေါက်ဖောက်ရတယ်. လက်ဝင်သာရုံလေးပေါ့… မကျယ်မကျဉ်းပေါ့ကွာ..”
ဆွိနှင့်ကွိတို့ အပီအပြင်ပင် လိုက်မှတ်နေကြပါသည်…
ဆွန်ကျဲအိုက အသံကိုနည်းနည်းနှိမ့်လျက် ဆက်ပြောသည်…
“မင်းတို့သိလား… လူတွေတောင် ကိုယ်ရပြီးရင် ပြန်ပြီး လက်လွှတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး. မျောက်ဆိုမှတော့ ဝေလာဝေးပေါ့ကွာ…”
“နင်ပြောတာ ငါပြန်ပြောလိုက်ရင် သူကြီးက သူ့ကိုစောင်းပြောတယ်ဆိုပြီး နင့်ကို ဆွဲစိလိုက်လို့ နင်ငုတ်တုတ်မေ့သွားမယ်နော်. ချယ်လ်ဆီး မန်ယူကိုနိုင်လို့ ငိုနေတဲ့သူတွေထက် ပိုဆိုးသွားမယ်. ဟွန့်…”
ဆွိ၏ ပျော့စိစိခြိမ်းခြောက်သံကြောင့် ဆွန်ကျဲအိုတစ်ယောက် ဒီတစ်ခါ တကယ်ဖြုံသွားတော့၏။
“မလုပ်ပါနဲ့ကွာ. မျောက်ဖမ်းနည်းအကြောင်း ဆရာစားမချန်ပြောပြပါမယ်.. ခါကွင့်လာကွတ် ပါနော်…”
“အံမယ်. သူတောင် ခွင့်လွှတ်ဆိုတာကို ကကြီးနဲ့ ပြောတတ်နေပြီ. သိပ်တော်တာပဲ. အာဘွား…”
ဆွိ၏ စကားများကို ဆွန်တစ်ယောက် ဒီတစ်ကြိ်မ်တွင်မတော့ ပြန်လည်တွန်းလှန်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ. မလွန်ခင်က ကျွံခဲ့မိပြီကိုး…. သွပ်သွပ်သွပ်…. (အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးခြင်းဖြစ်၏.)
“အုန်းသီးကို အပေါက်ဖောက်ပြီး အထဲမှာ မျောက်တွေကြိုက်တတ်မယ် ထင်တဲ့ မုန့်ချိုချိုလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက် ထည့်ထားလိုက်တယ်ကွာ…”
“မျောက်က မုန့်နံ့ရတော့ အုန်းသီးထဲကို လက်နှိုက်ပြီးယူတယ်. ပြီးတော့ လက်ကို ပြန်ထုတ်တော့ ထုတ်မရတော့ဘူး.. အုန်းသီးအပေါက်ဝမှာ တစ်နေတယ်…
မျောက်က စိတ်ပူပြီး အားနဲ့ရုန်းတယ်. မရဘူး. အုန်းသီးအပေါက်ဝမှာ မျောက်ရဲ့လက်က တစ်နေဆဲပဲ..
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အုန်းသီးအပေါက်ဝက လက်ဖြန့်ပြီး အ၀င်အထွက်ပဲ လုပ်လို့ရတာလေ. လက်သီးဆုပ်ပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်လို့မရဘူး…
မျောက်က မုန့်ကို လက်မလွှတ်နိုင်တော့ လက်သီးဆုပ်နဲ့ပဲ ရုန်းထွက်တယ်. အဲဒီ့မှာ သူ ဒုက္ခရောက်တာပဲ… မုန့်ကိုလွှတ်ချလိုက်ရင် လွတ်နိုင်မယ်ဆိုတာကို သူမသိဘူး. ”
ဆွန်ကျဲအို၏ မျောက်ဖမ်းနည်းအကြောင်းကို ဆွိနှင့်ကွိတို့ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် ရေးမှတ်နေကြလေသည်…
ဆွန်ကျဲအိုက ဘလော့ဂါရန်အောင်၏ လေသံဖမ်းကာ…
“ကဲ. Conclusion ဆွဲမယ်… အဟမ်းအဟမ်း…
ငါဆိုလိုတာက… မျောက်ထောင်ချောက်ကနေ မျောက်ရုန်းထွက်နည်းက လွယ်ပါတယ်. သူဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မုန့်ကို လွှတ်ချလိုက်ပြီး လက်ဝါးကို ပြန်ဖြန့်ပြီး အသာလေး လျှိုထုတ်လိုက်ရုံပဲ…
ဒါပေမယ့် မျောက်က သူ့မုန့်ကို လက်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ…
အဲဒါ ငါ့ရဲ့ မျောက်ဖမ်းနည်း နိဿရည်းပဲ… ”
ကဲ… ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်…
ဆရာကြီး ရှီးဘောဒိသာပါမောက္ခ၏ ခန့်ညားထည်ဝါသော အသံဝါကြီးအောက်တွင် အိပ်ငိုက်နေကြသော မင်းညီမင်းသားများ လန့်နိုးလာကြလေတော့သည်…
“၂၅ % ဟုတ်လား…”
“ကန့်ကွက်မဲပေးရင် ၃ နှစ်၊ မဲလုံးဝလာမပေးရင် ၁၄ နှစ် ဟုတ်လား”
“စစ်ရေးအမြင်ရှိရမယ်ဆိုပါလား… ကောင်းသားပဲ. Star Wars ဆော့မယ်. Red Alert ပစ်မယ်.”
တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဖြင့် မေးမြန်းပြောဆိုနေကြသော မင်းသားငယ်များ၏ အသံများကို ဖုံးလွှမ်းလျက် ဆရာကြီးက သူ၏ ဩ၀ါဒကထာကို မြွက်ကြားလေသည်…
“တပည့်တို့… မင်းတို့သာ မျောက်နေရာမှာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လွတ်မြောက်အောင် ကြံဆောင်ကြမလဲ…”
အိုင်ကွီမြင့်သော ရှားလားလားမင်းသားက စပြောသည်…
“အဓိကပြဿနာက မျောက်က အုန်းသီးကိုပဲ အာရုံစိုက်နေလို့… အုန်းသီးကို ချည်ထားတဲ့ ငုတ်တိုင်ကို ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲနှုတ်ပြီး တောထဲဝင်ပြီး. ပြီးတော့ တောထဲရောက်မှ ပြန်ပြီး Figure out လုပ်ရင် အနည်းဆုံးတော့ မုဆိုးရန်က လွတ်နိုင်တယ်…”
လက်ခုပ်သံများမဟုတ်ပါ… ရှားလားလားမင်းသားကို ၀ိုင်းပြီး နပန်ကျင်းကြခြင်းပင် ဖြစ်တော့၏…
“တော်တော်တုံးတဲ့ကောင်… ငုတ်တိုင်ကို ပေါက်ဖော်အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေကိုယ်တိုင် ကချင်ပြည်နယ် ကျွန်းသစ်တောတွေကို ခုတ်ထစ်ပြီး ယူလာတာကွ. မင်းက ဘာသိလို့လဲ… ဘယ်တော့မှ မကျွတ်ဘူး…”
“မျောက်က ကြိုးကို ကိုက်ဖြတ်လိုက်ရင်ရော… ဆရာကြီး”
“မရဘူး.. အူကြောင်ကြား… အဲဒီ့ကြိုးက ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကို ဆွဲကြိုးချဖို့ လုပ်ပေးထားတဲ့ ကြိုးထဲက ကျန်တာကို အော်ဒါမှာထားတာ. မလွတ်ဘူးကိုယ့်လူ… မရဘူး.. အူး..ဟူး…ဟူး…”
ရော့ကာမက်တဲလ်သာကေတမင်းသားက ၀င်ထောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်…
“Yo. မင်းတို့ဖောက်တွေးတတ်ရမယ်ကွ … you know. အများအတွက် အနည်းတော့ရင်းရမယ်… မြွေမသေတုတ်မကျိုးလုပ်လို့တော့ မရဘူး… you know what I am saying?”
ဖလစ်ဖလော့ပ် ရက်ပါမင်းသား ၀င်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်…
ဆရာကြီးလည်း အိုင်ကွီမြင့်သော သူ၏ ချစ်တပည့်များ၏ ဆွေးနွေးခန်းကို နှစ်ခြိုက်အားရစွာ ပြုံးကြည့်နေခဲ့လေသည်…
“မုဆိုးလာဖမ်းရင် လိုက်သွားလိုက်… သူထားရာမှာ လိမ်လိမ်မာမာနေလိုက်… မုဆိုးစိတ်ထဲမှာ ဒီမျောက်လေး လိမ္မာတယ်ဆိုပြီး အခွင့်ထူးတွေပေးလာတော့မှ တစ်နေ့မှာ ရုန်းထွက်ပြေးပေါ့… ဒါကို ပူးချတယ်လို့ ခေါ်တယ်.. you know what I mean, guys?”
“လခွီးထဲမှပဲ… တို့ဗမာအစည်းအရုံးလည်း ဒိုင်အာခီနဲ့ ဒီလိုကွဲခဲ့ဖူးပြီ. မင်းက သမိုင်းကိုမလေ့လာဘဲ ပူးချဖို့ ကြိုးစားချင်သေးတယ်. မင်းကိုပဲ ဟိုကပူးချသွားလိမ့်မယ်… ဖွတ်ကျားရဲ့…”
“ဘာကွ. ငါ့နာမည်ယူသုံးရအောင် မင်းက ဘာကောင်မို့လဲ… ဖျောင်း. ခွပ်. ဒိုင်း..”
အခြေအနေအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသွားပါသည်… ဖလစ်ဖလော့ပ်ရက်ပါမင်းသား၏ အကြံပြုချက်အား ဝေါ်စွတ်မင်းလောင်းမင်းသားမှ ၀င်ထောက်စဉ် အင်တာဖွတ်ကြား၏ လက်ဝါးစာ မိသွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်…
“တကယ်ဆို မျောက်က ပဓာနနဲ့ သာမညမခွဲနိုင်လုိ့…”
ဆရာကြီး၏ မျက်ခုံးများပင် အနည်းငယ်ပင့်တက်သွားခဲ့ရသည်…
ကျန်းစန်းဖုန်းစတိုင်ဖြင့် ဆရာကြီးလည်း မုတ်ဆိတ်မရှိသော သူ၏ မေးစေ့ကို စတိုင်ကျကျ ပွတ်သပ်နေခဲ့ရင်းက…
“ပြောပါဦး ပလေယာလျှောက်ရွှီးမင်းသားလေးရဲ့… မျောက်ဘာလုပ်သင့်သလဲ…”
“သူ့ကိုဖမ်းမိထားတဲ့လက်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတာ. အဲဒီ့လက်က သူ့အသက်လောက် အရေးမပါဘူး…”
အားလုံးက တစ်ပြိုင်တည်း ၀ိုင်းဟာကြခြင်း ဖြစ်လေသည်…
“မင်းရဲ့အတွေးအခေါ်က terrorist ဆန်တယ်… ဒီတိုင်းတွေးနိုင်မယ်သာ မှန်ရင် အဲဒီ့မျောက်က မျောက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး… အိုင်ကျူမြင့်လွန်းသွားပြီ… မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ..တော်ကြာ ဘင်လာဒင်က လာပြီး recruit လုပ်သွားရင် ငါတို့လူတွေဒုက္ခ…”
ဆရာကြီးရှီးဘော၏ မကျေမချမ်း ညည်းတွားသံကို ကြားတော့ အင်တာနေရှင်နယ် ဖွတ်ကြား၏ လက်ဝါးက မြောက်တက်သွားသည်…
ပလေယာလျှောက်ရွှီးမင်းသားလည်း အခြေအနေမကောင်းသည်ကို အကဲခတ်မိသည်နှင့်..
“ကိုကြီးဖွတ်… ဒီမှာလေ ကိုကြီိးဖွတ်ကတော် ဖွတ်မဒမ်အတွက် စိန်တစ်ရံစာ… အာဖရိကစိန်နော်. ဘာမှတ်လဲ…”
အင်တာဖွတ်၏ မြောက်တက်သွားသော လက်ဝါးသည် အပြားလိုက်ဖြစ်သွားကာ တစ်စုံတစ်ရာကို ခံယူဖို့ အသင့်ဖြစ်နေလေတော့သည်…
အားလုံးတစ်ယောက်တစ်ပေါက် ၀ိုင်းပြောနေကြသည်ကို စိတ်မရှည်နိုင်တော့သည်နှင့် ဆရာကြီးရှီးဘော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရပါတော့သည်…
သို့သော် ကြိုပိတ်ထားရသေး၏… သူဖြေနိုင်သည်များကိုသာမေးရန်နှင့် မဖြေနိုင်သည်များကို ဘောင်ကျော်မေးသော ဂျာနယ်လစ်များကို နာမည်မှတ်ထားရန် အင်တာဖွတ်ကျားကို ကြိုတင်မှာထားရသေး၏…
“ကဲ… အားလုံးပဲ ရှုပ်ကုန်ကြပြီပေါ့…
ကျွန်တော်တို့မျောက်ဟာ နောက်ဆုံးမှာ အဖမ်းမခံရပါဘူး…
ဒါပေမယ့် သူ တောထဲမှာ အုန်းသီးပိုက်ပြီး သူ့ဘ၀ကို ကုန်ဆုံးသည်ထိ နေထိုင်သွားခဲ့တယ်…
မျောက်အုန်းသီးရသလို ဆိုတဲ့စကားပုံဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျောက်ကို ကြည့်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စကားပုံပေါ့ဗျာ…”
“ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြော… နားနားပြီးပြောမောမယ်… တိုးတိုးတိုးတိုးလေးပြော.. အားလုံးလည်းကြားပါတယ်..”
ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက် အင်းစိန်သို့ အထူးစပါယ်ရှယ် ကားပြာကြီးဖြင့် ကြွမြန်းသွားရပါတော့သည်…
ဆရာရှီးဘော ဆက်ပြီး သတင်းစာတွေ ရှင်းပါသည်… မြန်မာတိုင်းမ်၊ ဗွိုက်စ် စသည့် ခွင့်မပြုသော သတင်းများကို ဖော်ပြသည့် သတင်းစာများကို စရှင်းပါသည်…
ဆရာရှီးဘောကို ဘက်ကပ်လုပ်ထားပေးသော ဂျာနယ်လစ် စွယ်စုံသုတမှ စာတည်းမှူး ရင်ချွန်းမူး ထမေးပါသည်…
“ဒါဆို ဆရာကြီး… မျောက် ဘယ်လိုလွတ်မြောက်သွားခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို အခြေခံလွတ်မြောက်လိုခြင်း သီအိုရီ (၀ါ) Bare Necessity ရှုထောင့်ကနေ ပြောပြပေးပါလား ဆရာကြီး…”
ရှီးဘောဆရာကြီးလည်း အားလုံးသော ပရိသတ်ကို ခြုံငုံကြည့်ရှုသုံးသပ်ပြီးသကာလ သူ၏ ကွန်ကလူးရှင်းကို ပြောချလိုက်လေတော့သတည်း…
“ဟန်နီ… ငိုပါနဲ့ကွာ…” တဲ့….အဲလိုပဲဆရာကြီးလေသံနဲ့ ဟန်နီလို့ လိုက်ခေါ်ရသလား။
ဟာသ အက်ဆေး အရှည်ကြီးကို အကြာကြီး ဖတ်သွားပါတယ်.. :-)
ရေးတဲ့သူ ဟိုလှည့်ဒီလှည့် ရေးလိုက်လား မသိဘူး.. ဖတ်တော့လည်း စာရှည်လွန်းတော့ ဟိုလှည့်ဒီလှည့်နဲ့ပဲ . ..
ကိုရန်အောင်ရေ.. ပိုစ့်က အရမ်းရှည်ပေမယ့် အစအဆုံး ဖတ်သွားပါတယ်။
မိုက်တယ်ဗျာ။ ကြုံရင်ကြုံသလို နှိပ်နှိပ်ပြီးရေးထားတာ ဖတ်ရတော့ တော်တော်ရီရတယ်ဗျ။
ကိုရန်အောင်က အားလုံးကို စကားပြောသလိုလုပ်ထားတော့.. ဒီလိုဟာမျိုးကို TP Thingyan လိုမျိုး အငြိမ့်မှာ အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ လူရွှင်တော်တွေ ကသရုပ်ဆောင်ပြီးလုပ်ရင် တော်တော်ကောင်းမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
ဇာတ်သိမ်းလေးကိုတော့ အကြိုက်ဆုံး.. သေနတ်အကြောင်း...
ပြီးတော့ မုန့်လဲ လိုချင် လက်ကိုလဲ မလွှတ်.. လွှတ်ဖို့မေ့နေတဲ့ မျောက်.. ဟားဟား.. အခုထိ ရယ်ရတုံးပဲ..
တူပါပေတယ်... မျောက်.. သေနတ်..
အရမ်းရီရတယ်.. ထိလဲထိတယ်.. မင်းသားတွေနာမည်က ရှယ်ပဲ.. အလုပ်ကနေ ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီးထိုင်ရီနေရတယ်..
လက်ခုပ်သံများမဟုတ်ပါ… ရှားလားလားမင်းသားကို ၀ိုင်းပြီး နပန်ကျင်းကြခြင်းပင် ဖြစ်တော့၏…)
နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာလေးတွေကလဲ အရမ်းမိုက်တယ်.. ပိုစ့်ကရှည်ပေမဲ့ ဆက်ဖတ်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်.. story line နဲ့ပြောချင်တာကို တီထွင်နိုင်တဲ့ creative thinking ကို တကယ်သဘောကျတယ်...
"တိန်.. ဒိန်း.. အုံး"...
ကိုရန်ကြီး comment ဖတ်ရင်းမြောက်ပြီး မျက်နှာကျက်ဖြင့် ဆောင့်မိသံ.. "အုံး" ကတော့ ဒီစာကြောင်းဖတ်ပြီးပြန်ပြုတ်ကျသံ..
ဟား... ဟား.. (စတာနော်) :P
အစ်ကိုရေ... ရှယ်ကျစိမ့်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ခေါ်တာဗျို့။
“မရဘူး.. အူကြောင်ကြား… အဲဒီ့ကြိုးက ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကို ဆွဲကြိုးချဖို့ လုပ်ပေးထားတဲ့ ကြိုးထဲက ကျန်တာကို အော်ဒါမှာထားတာ. မလွတ်ဘူးကိုယ့်လူ… မရဘူး.. အူး..ဟူး…ဟူး…”ဆရာကြီး ရှီးဘောဒိသာပါမောက္ခ၏ ခန့်ညားထည်ဝါသော အသံဝါကြီးအောက်တွင် အိပ်ငိုက်နေကြသော မင်းညီမင်းသားများ လန့်နိုးလာကြလေတော့သည်…
“စစ်ရေးအမြင်ရှိရမယ်ဆိုပါလား… ကောင်းသားပဲ. Star Wars ဆော့မယ်. Red Alert ပစ်မဆရာကြီး ရှီးဘောဒိသာပါမောက္ခ၏ ခန့်ညားထည်ဝါသော အသံဝါကြီးအောက်တွင် အိပ်ငိုက်နေကြသော မင်းညီမင်းသားများ လန့်နိုးလာကြလေတော့သည်…
မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ အန္တိမဈာပနအစီအစဉ်